NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: "#NABShow" ရှာရန်ရလဒ်များ
Home » #NABShow: ရှာရန်ရလဒ်များ:
တိုက်ရိုက်လွှ IP ကိုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ NAB 2019 TVU ကွန်ယက်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်မှာ TVU မှာ G-Link ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ Point-to-point transmission အတွက်အင်တာနက်-based ဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ TVU မှာ G-Link ကိုဝက်ဒုတိယအောင်းနေချိန်နှင့်အတူတယောက်ကိုတယောက်တည်နေရာကနေ HD ဗီဒီယိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသာအများပြည်သူကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးအရည်အသွေးမြင့်ဂီယာအောင်မြင်ရန်အနေနဲ့တတ်နိုင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းပေးပါသည်။ G-Link ကို application များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် ...
#GALSNGEAR, ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယို (WIFV) တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအစပျိုးမှု, Las Vegas မှာအဆိုပါ9NAB ပြရန်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် 10th မှတဆင့်ဧပြီ 2019th အပေါ်အများအပြားဖြစ်ရပ်များ hosting ပါလိမ့်မည်။ #GALSNGEAR နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုအမြတ်ရရှိမှုများတွင်အမျိုးသမီးများ၏သေချာစေရန်လုပ်ဆောင်နေ၌အကြှနျုပျတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းဒါအရေးကြီးပါသည်။ "အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နေကြသည် ...
2018 #NABShow: Sony ရဲ့ XDCAM Professional ကတီဗွီကင်မရာလိုင်းကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့
Sony က PXW-Z280 (သစ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်) နှင့် PXW-Z190 (4K Compact) နဲ့လိုလားသူ cam-corders ၎င်း၏ XDCAM လိုင်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဤအမော်ဒယ်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအပေါင်းလိုက်သောပျေါလှငျ "မျက်နှာဦးစားပေး AF" နှင့်အသစ်ထည့်သွင်းခြင်းအပါအဝင်အဆင့်မြင့်မျက်နှာထောက်လှမ်း autofocus (AF) များမှာ "မျက်နှာသာလျှင် AF ။ " ဗဟိုခန်းမတဲ C11001 တည်ရှိသောအဆိုပါ Sony ကပြပွဲသို့သွားရောက်ရန်သေချာ Be! ဟန်ပြကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်: အဆိုပါ ...
2018 #NABShow: ကို Creative မာစတာစီးရီး: Janusz Kaminski: Image ကိုလုပ်ခြင်း၏ဆယ်စုနှစ်သုံးခု
အဆိုပါ 2018 #NABShow မှာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်တွေအများဆုံးရိုက်ကူးရေး၏တဦးတည်းအနေဖြင့်နားထောင်ကြလော့ Janusz Kaminski စက်မှုလုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသည်အရှိဆုံးပြင်းထန်သောအလုပ်အချို့ကိုထောက်ပံ့အတွက်အမြင်အာရုံ artistry ၏ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း 30 နှစ်ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ ရိုက်ချက်၏ဤလူနေမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်မာစတာနှင့်တသားတအင်တာဗျူးအပေါ်ဒီတစ်ခုလက်လွတ်မနေပါနဲ့! Janusz Kaminski: သုံးခု ...
2018 #NABShow: ကို Creative မာစတာစီးရီး: အဆိုပါ VFX wizardry နောက်ကွယ်မှာ Stranger အရာ 2
စာရင်းဇယားက၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်၏ပထမသုံးရက်အတွင်းသန်း2အထက်ကြည့်ရှုသူများအတွက်ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲပျမ်းမျှရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုကြားခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့အများစုက Stranger အရာ 15 မြင်ကြပြီ! အခုတော့ #NABShow တက်ရောက်မှာမြင်ကွင်းများနောက်ကွယ်မှ၏အမြင်အာရုံ artistry မှာ peek ယူနိုင်ပါတယ်ဒီ 18 သူဟာ Emmy အမည်စာရင်းတင်သွင်းပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါ VFX ...
2018 #NABShow: ကို Creative မာစတာစီးရီး: "က Black Panther": အဘယ်သူမျှမအခြားသောကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးထိပ်တန်းသူရဲကောင်းပုံပြင်ပြောပြ
အဆိုပါ 2018 #NABShow ကို Creative မာစတာစီးရီးလက်လွတ်မနေပါနဲ့: "က Black Panther": တနင်္လာနေ့ဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးထိပ်တန်းသူရဲကောင်းပုံပြင်ပြောပြ,9ကနေဧပြီလ 10: 30AM- 11: တည်နေရာ S20-S222 မှာ 223AM ။ ဤအချက်အလက်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲရုပ်ပုံအယ်ဒီတာအဖွဲ့, အသံများနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု featuring တည်းဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ (BIOS နှင့်အတူ) အသားပေးဟောပြောပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်: ဂျက်ဖရီ Baumann နဲ့အလွတ်တန်း Visual Effects ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါတယ် ...
2018 #NABShow: အဆိုပါ immersive မီဒီယာ Sessions ကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့
immersive မီဒီယာမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အစွန်းရောက်လူကြိုက်များရရှိထားသူများနှင့် NAB တက်ရောက်လာမယ့်မျိုးဆက်မီဒီယာနည်းပညာများတစ်ဦးအပြည့်အဝ spectrum ကိုနားလည်မှုပေးပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာမီဒီယာရှေ့တန်း၌စေရန်မည်ကဲ့သို့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ် post လိမ့်မယ်ခုနစ်ကြောက်မက်ဘွယ်အစည်းအဝေးများပေးလိမ့်မည်! လာ့စ်ဗီးအတွက်9NAB ပြရန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တနင်္လာနေ့ဧပြီလ 12 ကနေကြာသပတေးနေ့ဧပြီလ 2018 မှ spanning ...